Nin beeraley ah oo agab uu isku keenay ka sameystay cagaf uu beerta ku fasho - Radio Ergo
Xasan Cali Caddow oo saaran cagafta uu farsameeyay/Maryan Sheekh Cabdi/Ergo
(ERGO) – Xasan Cali Caddow oo ah makaanik ku nool magaalada Jowhar wuxuu ku dhiirraday inuu sameeyo gaari cagaf-cagaf macmal ah. Wuxuu ka sameeyay qalabka gaadiidka la soo isticmaalay iyo matoorka beeraha lagu waraabiyo.
Xasan oo 52 jir ah, oo sidoo kale ah beeraley ayaa sheegay in sababta uu u sameeyay cagafta ay tahay in uu ku fasho beertiisa uuna uga maarmo lacag badan oo uga bixi jirtay cagaf-cagaf kiro ah.
Waxay ku qaadatay sameynteeda muddo afar sano ah. Waxaa uga baxay kharash gaaraya $4,500, oo $2,000 ay tahay deyn weli lagu leeyahay oo uu ka soo qaatay dad ehelkiisa ah.
“Sida caadada ah 900,000 oo shillin Soomaali ah ayaan cagaf-cagaf ku soo kireysan jiray saddexdii saacadood. Sidoo kale 350,000 oo shillin Soomaali ah ayaan maalin walba inta aan beerta faleyno siin jiray saddex qof oo falidda iga caawisa,” ayuu yiri.
Cagaf-cagafta Xasan ayaa awood u leh inay isku qabato dhowr shaqo iyadoo ku shaqeyneysa shidaal yar. Shaqooyinkaas waxay isugu jiraan fallidda beerta, carro-gediska iyo abuurka.
“Waxay wadataa yaambooyin ay dhulka ku faleyso, iyo qalabka carro-gediska. Marka ay carro-gediska dhameyso, waa laga furaa oo waxaa loo xiraa abuur. Haddii ay abuurka dhameyso waxaa loo xiraa kawaaw,” ayuu yiri.
“Waxay wadataa labo baaldi oo galley loogu shubayo, halkaa ayay abuurka ka firdhineysaa.”
Xasan wuxuu sheegay in cagaf-cagafta uu ku tijaabiyay beer hal hektar ah oo uu leeyahay saaxibkiis uuna ku guuleystay beeristeeda, sidoo kalena uu ku beeray beertiisa.
Wuxuu hadda qorsheynayaa inuu ku beero beer afar hektar ah oo ay qoyskiisa ku leeyihiin baaddiyaha Jowhar, maaddaama uu roobka Deyrta ka da’ayo gobolka Shabeelaha dhexe.
Ninkaan ayaa sheegay in uu ku fikirayo in cagaf-cagafta uu ku kireeyo 280,000 oo shillin Soomaali ah ($11) saacadii si uu kharashka uga yareeyo beeraleyda deegaanka. Cagafta caadiga ah waxay beeraleyda ka qaadataa 300,000 oo shilin saacaddii.
Xasan oo ah aabbaha 13 carruur ah wuxuu Jowhar ku leeyahay garaash yar oo ay kala shaqeeyaan walaalkiis iyo curadkiisa. Wuxuu xusay in isaga uu labadaba u tababaray shaqada. Wuxuu farsameeyaa makiinadaha waaweyn sida kuwa galleyda lagu shiido. Wuxuu mekaanikannimada ka shaqeynayaa muddo 40 sano ah.